﻿ फोन उठाउने बित्तिकै ‘हेल्लो’ किन भनिन्छ ? जान्नुहोस् कारण
फोन उठाउने बित्तिकै ‘हेल्लो’ किन भनिन्छ ? जान्नुहोस् कारण
फोन उठाउने बित्तिकै हेल्लो भन्ने गरिन्छ । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा बोल्दा सुरुमा हेल्लो भन्ने चलनको सुरुवात कसरी भयो होला ? यो सबैका लागि चासोको विषय हुनेछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य चाहिँ यस्तो छ ।
टेलिफोनका आविष्कारक हुन् अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल । १० मार्च १८७६ मा उनले टेलिफोनको आविष्कार गरी पेटेन्ट लिए । फोनको आविष्कार गरेसँगै उनले सबैभन्दा पहिले आफ्ना मित्र वाट्सनलाई सन्देश प्रेषित गर्दै भने : श्री वाट्सन यहाँ आऊ । मलाई तिम्रो खाँचो पर्यो । ग्राहम बेलले फोनमा हेल्लो होइन Ahoy शब्द बोलेका थिए ।
टेलिफोनको प्रयोग आम रुपमा हुन थालेसँगै मानिसहरुले फोनमा कुरा गर्दा सुरुमा बोल्ने शब्द हुन्थ्यो : Are ypu there ? अर्थात् मलाई सुनेका छौ ?
उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्नका लागि थोमस अल्बा एडिसनले पिट्सबर्गको केन्द्रीय जिल्ला तथा मुद्रण टेलिग्राफ कम्पनीका अध्यक्षलाई पत्र लेखे र टेलिफोनमा सबैभन्दा पहिले बोल्ने शब्द हेल्लो राख्न प्रस्ताव गरे ।